Kitapo hoditra - Utien Pack Co ,. Ltd.
Fampisehoana manintona sy faharetana farany ambony
Rehefa raisina ny fonosana vita amin'ny vata, dia sarimihetsika vita amin'ny vatana manokana no ampiasaina hamehezana ny vokatra amin'ny sarimihetsika ambany na boaty fanohanana efa vita. Utien pack dia manana fomba fonosana roa: fonosana hoditra banga Thermoforming ary fametahana tombo-kase miaraka amin'ny fonosana hoditra.
Unifresh®-Skin Pack ： manome ny vokatra fampisehoana vokatra tsara indrindra sy ny fiainana talantalana
Unifresh ® Ny sarimihetsika eo amin'ny fonosana sticker dia mifanaraka amin'ny endrik'ilay vokatra, toy ny sosona faharoa amin'ny hoditry ny vokatra, ary manisy tombo-kase azy amin'ny sarimihetsika ambany miforona na ilay boaty fanohanana efa vita. Ny sarimihetsika dia miorina mafy sy feno endrika famehezana ny vokatra, misoroka ny fihenan'ny rano, afaka mampiseho ny vokatra mitsangana, mitsivalana na mihantona, ary koa manitatra ny fiainana talantampon'ireo vokatra fonosana. Ny fampiharana ny haitao amin'ny fonosana namboarina dia mitaky ny fampiasana ny milina famonosana hafanana sy ny fametahana ny milina na ny milina fanamboarana boaty vita amin'ny boaty vita amin'ny boaty utienpack.
Fonosana hoditra amin'ny thermoforming
Famehezana ny hoditra
Unifresh ® Ny fonosana hoditra dia tena mety amin'ny famonosana vokatra avo lenta, toy ny hena sy hena, hazan-trondro sy trondro, hena akoho amam-borona, sakafo mety, sns. Unifresh koa azo ampiasaina amin'ny vokatra sasany misy rano be ranony na vokatra misy takiana amin'ny fiainana ambony talantalana ® fonosana hoditra.
Ny tombony azo amin'ny fonosana hoditra, ankoatry ny faharetan'ny talantalana lava dia mety amin'ny fangatahan'ny mpanjifa ny faharetana maharitra; Izy io koa dia manana endrika avo lenta, hita maso sy azo kitihina; Raha ampitahaina amin'ny fonosana hafa dia tsy misy mitete, tsy misy ranony ambonin'ilay sarimihetsika, tsy misy zavona ary mihozongozona dia tsy hisy fiantraikany amin'ny endrika sy ny endrik'ilay hena; Mora misokatra ihany koa izy ary mora ampiasaina; Ny fitaovana ambony (sarimihetsika sarimihetsika / sarimihetsika vita amin'ny vatana) dia ampitahaina amin'ny lovia mba hanaovana ny fanapahana tsara indrindra ary mampihena be ny vidin'ny famokarana.
Masinina fonosana sy fitaovana fonosana
Na ny milina famonosana horonan-tsary mamelatra na ny milina fanidiana famehezana boaty efa niasa dia azo ampiasaina ho an'ny fonosana mety amin'ny vatana. Ny milina famehezana boaty efa niova dia mila mampiasa boaty mpanohana efa niova endrika, raha ny masinina famonosana mafana kosa dia ampiasaina amin'ny famenoana, famehezana ary ireo dingana hafa aorian'ny fanitarana ilay takelaka horonan-tsary amin'ny Internet. Ny milina fametahana thermoforming dia azo namboarina arakaraka ny filan'ny mpanjifa, toy ny fanamafisana, fanontana logo, lavaka fametahana ary famolavolana firafitra haorina hafa, hanatsarana ny fahamarinan-toerana fonosana sy ny fanentanana amin'ny marika.
Masinina fanamafisam-peo tsy misy rivotra
Mpamaritra fitoeram-bokatra mandeha ho azy
Seal semi-Auto tray